EX - ABSDF: အီးဂါးဗားမန့်
"ဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျ အဲ့ဒါကို တော်တယ်တွေ
"ဘာကြောင့် အဲ့လို ပြောရတာလဲ?"
"ဦးလေးတို့ တုံးလို့လေ ... အသုံးမကျလို့လေ"
"ဟိုက ခန့်စရာဝန်ကြီးမရှိလို့ နေရာ ၄ နေရာတာဝန်ယူလိုက်ရတာကို ဦးလေးတို့က အဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီး လျှောက်မြှောက်ပေးနေတော့ သိပ်မကြာခင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ် သမ္မတချုပ်မှူးကြီးရာထူးတောင် ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိတော့ဘူး ဟီးဟီး ... မြှောက်ပေးကြ မြှောက်ပေးကြ ... မကြာခင်ဂိမ်းတော့မယ်"
"အင်း ... ခက်တော့ ခက်တယ်"
"ခက်တယ်ဆိုတာက ... သမ္မတဖြစ်ချင်စိတ်ကို ဆိုင်းငံ့ခိုင်းတာလည်းမင်းတို့ပဲ"
"သမ္မတချုပ်မှူးကြီးဖြစ်မှာစိုးလို့ သမ္မတရာထူးကို ဦးမြင့်ဆွေလိုမျိုး မလိမ့်တပတ်လုပ်ပြီး ယူပါလားလို့ ခိုင်းကြတာလည်း မင်းတို့ပဲ"
"အခု ဝန်ကြီးဌာနလေးခုကို လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတာလည်းမင်းတို့ပဲ"
"မင်းတို့ပြောသမျှသာ မှန်နေရင် အခုအချိန်မှာ NLD က ရွေးကောက်ပွဲကို ခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးပြီး ထောင်ထဲတောင် အကုန်ရောက်နေလောက်ပြီ"
"ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD မနိုင်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တာလည်း မင်းတို့ပဲမဟုတ်လား?"
"တစ်ခါတစ်လေကျတော့ နားရှိလို့သာ နားထောင်နေရတယ် မင်းတို့ပြောသမျှ အာပလာတွေမှန်း လူတိုင်းလည်းသိနေကြပါပြီကွာ"
"ဘာ အာပလာလဲဗျ ... အခု ဦးလေးတို့အမေစု ယူမယ့် ဝန်ကြီး ၄ နေရာမှာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးတစ်ခုတည်းတင် ဟိုတုန်းက ဝန်ကြီးခြောက်ယောက် အသည်းအသန်အလုပ်လုပ်ကြရတာဗျ"
"အင်း သိတယ်လေ ဘာဖြစ်လို့လဲ"
"ဟိုတုန်းက ဘေလ်ဆောင်ဖို့တောင်မှ အသည်းအသန်လုပ်ရတာတွေ မင်းမှတ်မိလား?"
"မှတ်မိတာပေါ့ဗျာ ဘေလ်ဆောင်ဖို့တောင် တနေကုန်ကြာလို့ နောက်ပိုင်း ပွဲစားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်"
"အေးလေ တချို့ဘဏ်တွေဆိုရင် ဖုန်းဘေလ်ဆောင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတောင် အလုအယက်ပေးကြသေးတယ်"
"အင်း ... ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်"
"အဲ့ဒီတုန်းက ဝန်ထမ်းတွေလည်း ခေါ်မဖော်တမ်းအလုပ်လုပ်ကြတာ မင်းတန်းစီဘေလ်ဆောင်ဖူးရင်တွေ့လိမ့်မယ်"
"အဲ့ဒီတုန်းက အပျောက်အပျက် လိုင်းပျက် လိုင်းမကောင်း ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာမျိုးရှိသလား?"
"အင်း နည်းနည်းတော့ ကြာတယ်ဗျ"
"ကဒ်ပျက်ရင် အနည်းဆုံး တစ်ရက် အဲ့ဒါ ပိုက်ဆံသိန်းချီကောင်းကောင်းပေးပြီး အဆက်အသွယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ချိတ်နိုင်မှ"
"အခု မင်းဘေလ်ဆောင်ရတာ တန်းစီရသေးလား?"
"အသည်းအသန်အလုပ်လုပ်ပြီး အရင်လိုကြန့်ကြာတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေ ရှိသေးလား"
"တယ်လီနော တို့ အူရီဒူး တို့လို မိုဘိုင်းတွေမှာဆိုရင် ပျောက်သလား ပျက်သလား သူတို့မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဖုန်းသာ မှန်ကန်ပလေ့စီ ခဏပဲ"
"အခု မင်းတို့ အမ်ပီတီ က ရှေ့သို့လှမ်းချီနေလိုက်တာများ ဆိုင်တိုင်းမှာ ကြော်ငြာတွေကပ် ဘေလ်ဖြည့်တာလည်းလွယ်လို့ အရင်ထက်ပိုကောင်းအောင် အသည်းအသန်လုပ်နေကြတာအရင်နဲ့ တူသေးလား?"
"သြော် .... "
"အဲ့ဒါကို မန်နေ့ခ်ျမန့် လို့ခေါ်တယ်ကွ အီးလိုပြောရင်တော့ Management ပေါ့ကွာ"
"စီမံခန့်ခွဲမှုမကောင်းရင် ဝန်ထမ်းတွေ အသည်းအသန်လုပ်ရပြီး ရလဒ်မကောင်းတာ သဘာဝပဲကွ"
"Management ကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးမှာ ဝန်ထမ်းတွေ အရင်လောက် အသည်းအသန်မလုပ်ရတော့သလို သုံးစွဲသူလည်း အရင်ထက်အဆင်ပြေချောမွေ့လာတယ်"
"ဒီတော့ကွာ ... စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းရင် အသည်းအသန်လုပ်ရပြီး အဆင်လည်းမပြေဘူး"
"စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းရင်တော့ အသန်းအသည်လုပ်စရာမလိုပဲ အဆင်လည်းပြေတယ်"
"ဒီတော့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ၆ ပါး အသည်းအသန်လုပ်ရတာ ဘာကြောင့်လို့မင်းထင်သလဲ?"
"အဲ မနေနဲ့ ... ညံ့လို့ ဆိုတာကို ရဲရဲကြီးပြောလိုက်စမ်းပါ"
"အခု ဆက်သွယ်ရေးမှာပဲကြည့် နည်းပညာလိုတဲ့နေရာကို နည်းပညာထည့်နေကြတယ်၊ အားနည်းချက်ရှိတဲ့နေရာ အားသာအောင် ဖြည့်နေကြတယ်၊ မားကက်ပိုင်းမှာလည်း အပြိုင်ရှိနေတဲ့အတွက် အရင်လို ရုံးကနေ ထိုင်မရောင်းနေနိုင်ပဲ ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေရတယ်"
"ဒါတွေက အရင်ထက်အများကြီးပိုပြီး လုပ်ရတဲ့သဘော"
ခေတ်မီနည်းပညာနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တော့ ဝန်ထမ်းလည်း အရင်လို အသည်းအသန်လုပ်လို့မရတော့တဲ့အပြင် ဘတ်တာဘုန်းတာလည်း မလွယ်တော့ဘူး"
"အဲ့ဒီတော့ နိုင်ငံတော် ဝင်ငွေတိုးတဲ့အပြင် ဝန်ဆောင်မှုရယူတဲ့သူတွေလည်း အရင်ထက်အဆင်ပြေလာတယ် ဝန်ထမ်းတွေလည်း အရင်လောက်ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူး အသည်းအသန်မလုပ်ရတော့ဘူးဆိုတာ မယုံရင် မင်းသွားလေ့လောကြည့်လိုက်"
"အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒီလို စနစ်မျိုးသာ တနိုင်ငံလုံးက ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာ အသုံးချနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလား?"
"အင်း ... ကောင်းတာပေါ့"
"E-Government (အီးဂါးဗားမန့်) တို့ E-Governance (အီးဂါးဗားနန့်စ်) တို့ကြားဖူးလား?"
"အဲ့ဒါ မင်းတို့ အသည်းအသန်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဝန်ကြီးတွေနဲ့ မင်းတို့သွားပြီး ဖျင်ကုန်းကန်တော့တဲ့ သမ္မတကြီးတို့ ပေါင်းထားတဲ့ အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက တတ်သိပညာရှင်တွေ ဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းနေကြတဲ့ဟာတွေဟဲ့ ငါတို့အမသားလေးရဲ့"
"သိတဲ့အတိုင်းပဲ မင်းတို့လို သောက်ပိန်းတွေက ဝိုင်းထောက်ခံတဲ့ သောက်ပိန်းအစိုးရဆိုတော့ အီးဂါးဗားမန့်ဆိုရင် ကွန်ပြူတာတတ်မှရမယ် လက်ကွက်နှိပ်တတ်မှရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးလောက်ပဲရှိတာလေ"
"ဒီတော့ ကွန်ပြူတာသင်တယ်ဆိုပြီး ဟန်ပြလောက်လုပ်တာကလွဲလို့ ဘာမှ အခုအထိ မအောင်မြင်သေးဘူး"
"ဟင် .... သေသာသေလိုက်ချင်တော့တယ်ကွာ ကမ္ဘာမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ အစိုးရတွေကို လိုက်ကြည့်လိုက်"
"အီးဂါးဗားမန့် ... ဆိုတာက မြန်မာလိုပြောရင် အီလက်ထရွန်းနစ် စနစ်အသုံးပြုတဲ့ အစိုးရစနစ် ပဲ"
"အဲ့ဒီတော့ နည်းပညာကို သုံးပြီး အီလက်ထရွန်းနစ် စနစ်နဲ့ အစိုးရကလုပ်ပေးနိုင်တာတွေကို ပြည်သူဆီလွယ်လွယ်ကူကူ အသိပေးနိုင်တယ် ပြည်သူကလည်း အစိုးရဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို လွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာနိုင်တယ် လိုအပ်တာတွေကို ပါဝင်ကူညီ အကြံပေးနိုင်တယ်"
"ဒါများ အခုလည်း ပြည်သူသိအောင် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေ လုပ်ထားတာပဲ"
"အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေကို ပြည်သူဝင်လာအောင် ဘယ်လောက် အသိပညာပေးခဲ့ပြီးပြီလဲ?"
"အဲ မနေနဲ့ဦး မင်းကိုပြောတာနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ် အီးဂါးဗားနန့် E-Governance ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြည်သူနဲ့အထိအတွေ့ပေးရတဲ့အပိုင်းပဲရှိသေးတယ်"
"E-Governance က ဘာလဲဗျ"
"အဲ့ဒီ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံသားတွေကြားမှာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သမျှ အရေးတွေကို နည်းပညာနဲ့ အလွယ်တကူ စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင် စီစဉ်တဲ့စနစ်ကိုပြောတာ"
"ဘာတွေလဲဗျာ .. ရှုပ်နေတာပဲ"
"ငပိန်းတွေအတွက်တော့ နည်းနည်းရှုပ်မှာပေါ့ကွာ အတိုပဲပြောမယ်နားထောင်"
"ဥပမာကွာ ... မင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်ချင်တယ်ဆိုရင် အခုလောလောဆယ်မင်းလုပ်ရမှာ ဟိုရုံးသွားလိုက် ဒီရုံးသွားလိုက် ဟိုဟာမှတ်ပုံတင်လိုက် ဒီဟာမှတ်ပုံတင်လိုက် ဟိုငွေသွင်းလိုက် ဒီငွေသွင်းလိုက်နဲ့ အချိန်အများကြီးမယူရဘူးလား?"
"စင်္ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ အဲ့ဒါတွေကို အိမ်မှာရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာကတဆင့် အချိန်တိုအတွင်းလုပ်လို့ရတယ်"
"မှတ်ပုံတင်ကြေး ၅သိန်း ကျော်သွင်းပြီး လုပ်မှ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်မယ့်အစား ၁သိန်းလောက်သွင်းပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခု အစပြုခွင့်ပေးလိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ထင်သလဲ?"
"လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်ချင်လာမှာပေါ့ ဟဲ့"
"အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ နိုင်ငံသားတွေ မှတ်ပုံတင်ကွာ ... အဲ့လို နည်းပညာနဲ့တစ်ခါတည်းမှတ်သားထားနိုင်ရင် မကောင်းဘူးလား"
"လူများပြီး အတုချည်းထွက်နေတဲ့ လ.ဝ.က တွေထိုင်ငိုကြရင်ငိုမယ် မြန်မာပြည် နိုင်ငံသားအရေးနဲ့ ရာဇဝတ်မှုအတွက်တော့ အတော့ကိုစိတ်အေးရမယ်"
"ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၊ ယာဉ်လိုင်စင်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ အချက်အလက်ကို အများပြည်သူရော အစိုးရပါ ကွန်ပြူတာနဲ့ဖြစ်စေ ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှုပ်သက်သာ အချိန်ကုန်သက်သာတာတွေဖြစ်လာမယ် အချို့ရာဇဝတ်တွေ ထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်မယ့်အပြင် ဘုန်းတာဘတ်တာတွေလည်း မလျှော့ချနိုင်ဘူးလား?"
"နိုင်ငံသားတွေ အဆင်ပြေအောင် နည်းပညာသုံးပြီး အစိုးရက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အတွက် အဆင်ပြေအောင်ကြံဆနိုင်မယ့် နည်းလမ်းသစ်တွေထွက်ပေါ်လာမယ် ..."
နောက်ပြီး ပြည်သူအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေကွာ"
"ဟ အချိန်တိုအတွင်း အစိုးရနဲ့လူထု ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်လုပ်နိုင်မှတော့ လူထုကြားထဲက အဆင်ပြေချောမွေ့စေမယ့် အကြံပြုချက်တွေ ဝေဖန်ချက်တွေကို အချိန်တိုအတွင်းရရှိနိုင်တာပေါ့ ... "
"လုပ်လိုက်တော့ မင်းတို့ဘပြောင်ကြီး ဖျင်ကုန်းအော်နေတဲ့ ကောင်းမွန်သောအစိုးရဖြစ်ဖို့နီးစပ်တာပေါ့ဟဲ့ ငါတို့အမသားလေးရဲ့"
"နည်းပညာကိုသုံးလိုက်ရင် ဘယ်လို Manage လုပ်မလဲဆိုတာပဲ စဉ်းစားစရာလိုတော့မယ်"
"အဲ့ဒီလို Manangement အတွက် ... စေတနာပဲလိုတယ်"
"အဲ့ဒီစေတနာက နည်းပညာကိုသုံးဖို့ဝန်မလေးတဲ့ သတ္တိနဲ့တွဲရမယ်"
"ဒါပေမယ့် ဦးလေးတို့နည်းပညာက ပြောသလောက်လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ"
"အင်း ... အင်ဖရာစထွက်ချာ တော့ လိုတာပေါ့"
"Infrastructure လေကွာ ... လိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပေါ့"
"သောက်ပိန်း နှီးနဲ့ထိုးလိုက်လို့ ဟက်တက်ကွဲတော့မယ် နည်းပညာသုံးပြီး စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကောင်းမွန်ဖို့၊ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြစ်ထွန်းဖို့၊ စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတည်ငြိမ်ဖို့၊ လူတွေ နည်းပညာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်အောင် ပညာပေးလုပ်ဖို့တွေ လမ်းပန်းချောမွေ့ဖို့တွေပေါ့ကွ"
"သြော် .... မလွယ်ပါဘူးဗျာ ... အဲ့ဒါတွေ အားလုံးရရင်တောင်မှ နည်းပညာသုံးပြီး စီမံခန့်ခွဲဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး"
"လူညံ့တွေကတော့ အသည်းအသန်လုပ်မှ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပြီး တော်ရုံကိစ္စနဲ့ စိတ်လျှော့လိုက်ကြတာ ထုံးစံပါပဲကွာ"
"ဒါဆိုရင် အောင်မြင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးပြကြည့်ပါလား?"
"ဟ ... ဖေ့စဘုတ်လေကွာ ... ဘာမဟုတ်တဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာလေးတွေက တုန့်ပြန်မှုတွေတောင်မှ အသုံးမကျတဲ့ အစိုးရနဲ့ဝန်ကြီးတွေရဲ့ လုပ်ရပ်အချို့ကို ဟန့်တားနိုင်သေးရင် နိုင်ငံအဆင့် အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်ကြီးနဲ့သာ ဆို လူတွေရော အစိုးရရော အချိန်ကုန်ငွေကုန်သက်သာပြီးလုပ်ငန်းတွေ မြန်ဆန်သွက်လက်ကုန်တော့မှာပေါ့ကွ"
"စေတနာတော့ပါဖို့လိုတယ် .... စေတနာကို ကောင်းမွန်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် နည်းပညာတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာ အဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေက အများကြီးပဲ"
"ဒါမျိုးတွေကို ဦးလေးတို့က အရင်ကဘာလို့မပြောကြတာလဲ"
"မင့်အဘတွေက စီမံကိန်းတွေလောက်စိတ်ဝင်စားပြီး ဘယ်သယံဇာတရောင်းရင်ကောင်းမလဲပဲတွေးနေကြတာကိုးကွ"
"ဒီကြားထဲ ဒီလိုတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းတွေ လူထုဆီက အကြံဥာဏ်တောင်းခံရမယ့်အစား အားရင် အဓိကရုဏ်းတွေ ထထပြီးလုပ်တော့ ဘယ်သူက မေတ္တာရှိမှာလဲ?"
"အဲ့လို သောက်မြင့်ကပ်အောင် နေခဲ့ကြတော့ နှီးနဲ့ဝိုင်းထိုးကြတာ မေတ္တာတုံးတွေ အကုန်ပြုတ်ကုန်ရောလေ"
"မင်းကို ငါပြောတာက နည်းပညာနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းပဲ ရှိသေးတယ် လူနည်းနည်းနဲ့လုပ်လို့ရပေမယ့် လောလောဆယ် ကနဦး ကုန်ကျငွေက များတတ်တယ်။ အသုံးစရိတ်ကို တော်တော်စီစစ်သုံးမယ့် NLD အစိုးရအတွက် တော်တော်စဉ်းစားမှာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုစဉ်းစားစဲကာလမှာ Management လုပ်ဖို့နောက်တစ်နည်းရှိသေးတယ်"
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ယူထားတဲ့ ဝန်ကြီးဌာန လေးခုပဲထားပါတော့"
"အဲဒီလေးခုစလုံးမှာ အခြားလူမခန့်ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ဦးတည်း ထိုင်ပြီး ဒိုင်ခံလုပ်ရမယ့်လို့ မင်းထင်သလား"
"ဒါပဲလေ ... အရည်အချင်းရှိတဲ့သူကို လက်ထောက်ခန့်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်ပေးစီမံခန့်ခွဲတာလည်း Management ပဲ ငါတို့အမသားလေးရဲ့"
"ကဲ ပြောစမ်းပါဦး ... ဘယ်သူက တုံးတာလဲ? ငါတို့အမသားလေးရဲ့"